Print Page - english အကြောင်းသိကောင်းစရာများးး
စာပေဌာန => သရော်၊ဟာသ၊ကလိတိတိ => လိင်စာပေမဟုတ်သော ဝတ္ထု ဆောင်းပါးနှင့် ကဗျာ ကဏ္ဍ => ဟာသ၊ ဥာဏ်စမ်း => Topic started by: moe lay on February 27, 2011, 11:18:42 AM
Title: english အကြောင်းသိကောင်းစရာများးး
Post by: moe lay on February 27, 2011, 11:18:42 AM
အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကပါ။ ဘိုတွေ လမ်းဘေးက ဘိန်းမုန့်ကို မြည်းကြည့်ပြီး ကြိုက်တော့ နောက်ထပ် ၂ ခု လိုချင်တာနဲ့ လက်၂ ချောင်းထောင်ပြပြီး “အနားသား တူး” လို့ ပြောတယ်။ ဘိန်းမုန့်သည်က အနားကို တူးအောင် လုပ်ခိုင်းတယ် ထင်ပြီး နောက်ထပ် ၂ ခုကို အနားတူးအောင် လုပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဗျာ။
ကဲ... ခုလည်း အဲဒီအတွေးလေးတွေနဲ့ ဘားဂလစ်ခ်ျကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
Damage = ဓားမကြီး
Duty = ဓာတ်တိုင်
Accessible = အေးဆေးဆေးပဲ
Copy = ကိုယ်ပိုင်
Busy = ဘူးဆိုင်
Business = ဘူးဇီးနှပ်
I’m very sorry = အိုင်ထဲ ဘဲထီးဆော့သည်
Vegetable = ဗိုက်ကြီးသေပြီအယ်
Nose = နို့ဆီ
Thunder = သန္တာ
Good Luck =ဂွတ်တလိတ်
Alone = အလုံး
New Light = နွားရူးလိုက်
Working = ဝက်ကင်
Come = ကိုးမီး
Internet = အိမ်သာနက်
Connection = ကိုးနတ်ရှင်
Sell Shit = ဆယ့်ရှစ်
How are you = ဟောင်းတာယူ
Strawberry = စတော်ကြီး (ဟိုက်စကူးတုန်းက စာတော်တဲ့သူကိုခေါ်တာ)
Lightning = လိုက်တက်နင်း
Parachute = ပါတာချူ (ရှူ)
Parasite = ပါတာစိုက် (ပိုက်ဆံ)
Exchange = အိပ်ချိန်
Busy = ဘာမှမဆိုင်
Cat (ကတ်) ကြောင်လျှာရွက်
Dance = ဒန့်ဒလွန်သီး
Monkey = မျိုးကျော့မြိုင်
Important = အပေါ်တက်
Oxen =ေ
Login = လိုချင်
Book = ဘူး အိုကေ
Sensitive = စန်းစန်းတင့်
Sparkling = စပါကလင်
Grammar = ဂန်ဒမာ
Oxen = အောက်ဆင်း
Sparrow = စပယ်ရုံ
Spelling = စပါးလင်
Webcam = ဝက်ကင်
Metal = မိတယ်
Tree = ထွီ
Cooker = ကိုဥက္ကာ
Jean = ဂျင်း
Damn it = ဒန်အစ် (ကွမ်းအစ် လက်ခွဲ)
Shit = ရှစ်
Warmly Welcome = ဝဲမြီးဝဲကုတ်
Email = အိမေ
Internet = အိမ်သာတက်
English = အန်ခဲ့သည်
အိမေ အိမ်သာတက်ပြီး အန်ခဲ့သည်
Lady = လေထီး
Weather = ဝက်သား
Discovery = ဒစ်စကို ဘဲထီး
New = နွားရူး
Notebook = နို့သီးဗူး (ကလေးနို့ဗူး)
Similar = ဆင်းမလား
Take Care = သိပ်ကဲ (အရမ်းကဲ ပိုးစိုးပက်စက်ကဲ)
Walking Shoe = ဝါးကနဲရှူး
Plaza = ပလာစတာ
Military = မိုက်လိုက်တာ ဝိုင်း
Authority = အော်သော် ရိုက်သည်
Police = ပေါ်လစီ
Junta = ကြမ်းတာ
Immigration = အေးမိ ခလေး ရှင်
That pistol = သတ်ပစ်တော့
Dodge Made in USA= ဒေါ်ဒဂီး မေဒီးအင် ဦးစ
pause = ပေါက်စီ
Cookies = ကုက္ကိုင်း
Contact = ကွန်တပ်
Use = ဦးစီး
Setting = ဆက်တီ
Son = ဆန်
See = ဆီ
Say = ဆေး
Information = အိမ်ဖော်မေရှင်
Page = ပဲကြီး
Peace = ပဲစေ့
Manage = မာနကြီး
music player= မတ်စိ ပလရာ
Esc = အဆီ
Enter = အန်တာ....
Shift = ချိပ်စ်
Amusement = အမူးဆိုင်မယ်..
Thousand = သောက်စမ်း
Akin = အကင်
Akimbo = အကင်ဖိုး
Advertising = အဲဒီမှာ တက်စီ
Google Talk = ဂွတ်တယ်တော့!
Yahoo = ရဘူး (မြန်မာပြည်မှာ)
Comment = ခေါ်မှ / ကောင်မ
thank you = သန်းဦး(သန်းထူးရဲ့အကို) / သိုင်းရူး။
your welcome = ရွာရေကန်။
Your Majesty = ရွာမယ်ဇလီ
to who it may concern = တူတူး နင့်အမေခေါ်စမ်း!
it's crazy = လစ်နေပြီ။
it's cool = နှစ်ကူး
Baby = ဘေပြီ (ထုပြီ ၊ ရိုက်ပြီ ၊ နှိပ်စက်ပြီ)
Jaw = ဂျော (အမျိုးသမီး၏ တင်ပါးအလှ)
Monkey = မျိုးကြော့မြိုင်
you are my girl = သူ့ဟာ အပိုင်ပဲ။
Hip Hop = ဟစ်တော့!
Summer = စမ်းမလား?
Shut Up! = ".............." :P
Back Space = မျက်စေ့ (ကိုမျက်စေ့ မဟုတ်ပါ။)
Alter = အော်ထား
Numlock = နမ်းတော့! ( ဇွတ်)
Tab = တက်! ( ???)
chocalate = ချော့တက် (မွမွ)
Career = ဂယ်ကြီးလား
Playboy = ကလေးသိုင်း
Privacy = ပိုက်သိပ်မည်။
Help = ဟဲ့ !
Smile = စမိုင်
Password = ပက်ဝက်( တစ်ပက်ကို တစ်ဝက်ဝက်ထားခြင်း)
War Craft = ၀ါးခွက် ( သဘာဝ ကုန်ကြမ်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်)
Slide Door = ဆေးလိပ်ဖိုး
Metacafe = မိတာ ကဖေး
Audio = သြော်..ဒီလို
Appearance = သမီးများ လန့်
How r u?=မင်းဘယ်လိုကောင်လဲ:P
WTF = ဝက်သည်ဖတ်
No Pain No Gain = နို့ပိန် နို့ဂိန်
Hate = ဟသည်
Skype = စကိုက်ပြီ (ပီ)
Really = လီးရဲလီး (ကန်တော့ဗျာ ထိုင်းမှာ ထိုင်းလူမျိုးတွေ အဲဒိအသံနဲ့ထွက်တယ် )
Yellow = ရဲလိုး ... Card ရဲလိုးကဒ် (ကောင်းလိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကဒ်)
Swallow = ဆွဲလိုး
နောက်တစ်ခုက ဖေဖေ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက နောက်နေကြ
See the Swallow = ဆီသည် ဆွဲလိုး တဲ့
Large = လအကြီး တဲ့ဗျာ
Fate = ဖထီး
Title: Re: english အကြောင်းသိကောင်းစရာများးး
Post by: mingyi on February 28, 2011, 06:20:33 AM
it is your own thoughts or copy from somewhere? :-\_
Post by: ရဲရဲ on March 03, 2011, 11:23:06 AM
eminen = အမေနန်း
beckham = ဗဟန်း
bathez = ဘသက်
rooney = လုံးနီ
MANU = မနု
southpaw = စောက်ပေါ (english လက်ဝေ့လောကတွင်ခေါ်သောအသုံး)
goalkeeper = ဂိုးလီဗာ
manout = ဗျိုင်းထောင့် (offside ဖြစ်နေချင်း)
south china sea = စောက်ဂျိုင်းကစီး
shit = 8
Bernard Shaw = ဘနက်ရှော (ကိုဘနက်ရှောသွားချင်း)
south park = စောက်ပတ် ( studio တစ်ခု၏နာမည်)
cheese = ခြေဆီ
lee = လီး (ဂျင်းဘောင်းဘီ)
cool = 9
Post by: kyawkyawlwin on March 05, 2011, 04:16:06 PM
ဘယ်မှာဖတ်ဘူးမှန်းမမှတ်မိလို့ credit မပေးနှိင်တာခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ..ဒီတော့ပစ်နဲ့ မဆိုင်ရင်ရင်းရွှေ့ ပေးပါခင်ဗျာ..
မင်းဘယ်မှာ Live ( Show ) လုပ်မှာလဲ?
လှည့်ပြီး ထားခဲ့ သည်
How’s going ?
မင်းစိတ်ကို မိတ်ကပ် လိမ်းလိုက်ပါ
အပြင်မှာ စောင့် ကြည့်သည်
နေ့ စွဲနဲ့ အပြင်ထွက်သည်
ငါရေတွင်း်းကိုခံစားလို့ မရတော့ ဘူး
အောက်ကပိတ်ပြီး ***** လုပ်ပါ
Post by: artoflove.01 on March 18, 2011, 07:18:14 PM
Southsea in the southpart.
ဘယ်လို အသံထွက်မလဲတော့ မသိဘူး လိုသလိုသာ အသံထွက်ကြပါကုန်။
Post by: zero0 on March 24, 2011, 10:35:47 AM
I သည် am နှင့်တွဲပါသည်။
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ is ဖြင့်တွဲလိုလျင်
I is between H and J.
I is similar to the number of ရောမ ၁။ 8)
Post by: zero0 on March 24, 2011, 12:11:37 PM
ဒီစာကြောင်းက ဘာထူးခြားပါသလဲ ...
Post by: ပုဂံငကျွဲ on March 24, 2011, 02:04:43 PM
A to Z အကုန်ပါတဲ့ စာကြောင်းကလေးတခုလေ
Post by: zero0 on March 24, 2011, 02:09:43 PM
See the Swallow.
အဲဒီလိုနဲ့ တောအုပ်ကလေး အလယ်ရောက်တော့
အင်္ဂလိပ်ကြီးက ကောင်းကင်မှာ ပျံနေတဲ့ ပျံလွှားကို လက်ညှိးထိုးပြပြီး
See the Swallow !
လို့ ဗမာကြီးကို အော်ပြောလိုက်တယ်
ငှက်ကို ပစ်မလို့လုပ်တုန်းမှာ ဘေးနားက ချုံပုတ်ထဲကနေ အမကြီးတစ်ယောက် ဆီပုံးကြီးရွက်ပြီး ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ထွက်ပြေးတာကို တွေ့လေသတဲ့ ...
သူတို့နှစ်ယောက်လည်း ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ အဲဒီအမကြီးနောက်ကနေ လိုက်ပြေးကြတာပေါ့
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ ၃ ယောက်ဟာ ကြောက်အားလန့်အားပြေးကြရင်းနဲ့ ရွာကိုရောက်လာတာပေါ့ .
ဒါပေမယ့်လည်း အမကြီးဟာ ပြေးတာကို မရပ်ဘဲ . နောက်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး ထပ်ပြေးလေသတဲ့
ဟို အင်္ဂလိပ်ကြီးနဲ့ ဗမာကြီးလည်း ဘာရယ်မသိ . အမကြီးနောက်က လိုက်ပြေးမြဲပြေးနေတာပေါ့
အဲဒီလိုနဲ့ သူကြီးအိမ်ရှေ့ကို ရောက်သွားတယ်
´´ သူကြီး . သူကြီး . သူကြီး ...... ´´ လို့
သူကြီးလည်း လက်ဆွဲတော် နှစ်လုံးပြူးနဲ့ ဆင်းလာပြီး
´´ ဟဲ့ . ဟဲ့ .. ဆီသည်လုံးတင်မ .. ဘာဖြစ်တာတုန်းဟ ´´
သူကြီး ခြေထောက်ကို တအားဖက်ပြီး ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ဟို နှစ်ယောက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး
`` သူတို့ . သူတို့ . ကျွန်မကို .. ကို .... ဆော်ကား ... ဆော်ကား ....... ´´
သူကြီးလည်း နှစ်လုံးပြူးနဲ့ ဟို၂ယောက်ကို ချိန်ပြီး
`` ဟေ့ ကောင်တွေ .. မင်းတို့ ... မင်းတို့ ..... ငါ ပစ်ထည့်လိုက်ရ ..... ´´
သူကြီးလည်း မိုးပေါ်ထောင်ပြီး သေနတ်ကို ခြောက်လန့်ပစ်ခတ်လိုက်တယ်
`` ဒိုင်း ... `` ဆိုပြီး ဟိန်းဟိန်းညံအသံကြီးကိုကြား
သူကြီးကလည်း သေနတ်ကြီးနဲ့ချိန်ထားတော့ ဟိုနှစ်ယောက်မှာ ဖင်ဗူးခေါင်းထောင် ရှိခိုးပြီး
`` သူကြီး .. သူကြီး ... မှားမယ်နော် ... မှားမယ်နော် ...... ``
(ဆက်ရေးပါ့မယ် ... ခဏလေးဗျို့ ... အလုပ်ပေါ်ခာလို့ )
Post by: Chit Min Maw on March 24, 2011, 02:49:33 PM
"တောင်ပင်လယ်သည် တောင်ဘက်တွင် ရှိသည်။" ဆိုတာကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ကြည့်ပါလား။ အမှန်တရား တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်။
"The South Sea is in the South Part." :)
Post by: zero0 on March 24, 2011, 03:00:26 PM
အဲဒီအချိန်မှာ သေနတ်သံကြားတော့ ရွာသူ/သားတွေလည်း လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ စုဝေးရောက်ရှိလာကြတယ်လေ .. ဘာဖြစ်နေလဲဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ဟို ၂ယောက်ကို တွေ့တော့ ၀ိုင်းထားကြတာပေါ့ .. ဟို၂ယောက်လည် ဘာရယ်မသိ တုန်လှုပ်ကြောက်လန့်နေတာပေါ့ ...
သူကြီးရဲ့ အောင်မြင်ထည်ဝါတဲ့ အသံကြီး ထွက်ပေါ်လာတယ် .
´´ ဟေ့ . မင်းတို့က ဒီ ဆီသည်လုံးတင်မကို ဆော်ကားဖို့ ပေါ့လေ ... သေပေတော့ ... ´´ လို့
အော်လိုက်စဉ်မှာပဲ ရွာသားတွေက ၀ိုင်းရိုက်ကြလေသတဲ့ ... သူကြီးက
`` ရွာသားတွေ တော်ကြစမ်းဟေ့ .. ´´ အော်လိုက်မှ ဟို၂ယောက်မှာ သက်သာရာ ရကြလေတယ်...
တစ်ကိုယ်လုံးမှာတော့ သွေးအနည်းငယ်နဲ့ ဖုန်တွေရောပြီး ပေပွလို့ပေါ့ .. ၂ယောက်လုံး ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတယ်လေ ... ဘာမှ မဟုတ်ဘဲ အသားလွတ် တွယ်ခံရတာကိုး ....
´´ ပြောစမ်း . ဘာကြောင့်လဲ .. ဘာဖြစ်လို့လဲ.. ´´ ဆိုပြီး သူကြီးက အော်မေးတော့ ..
ဟို၂ယောက်လည်း ကြောက်လန့်စွာနဲ့ ဖြေလေသတဲ့ ...
´´ ဒီလိုပါ သူကြီး .... +-*/)(ဂရ/%%ဋဋ ´´ လို့ အကြောင်းစုံပြောပြတာပေါ့ ...
သူကြီးလည်း သဘောပေါက်သွားပြီး ...
´´ ကဲ . ကဲ ... အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတာပါ ... ဆီသည်လုံးတင်မ နင်လည်း သေသေချာချာမဟုတ် .. ဘုမသိ ဘမသိပုံပြင်လိုပဲ ... နောင်ကို ဒါမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ ...´´ လို့ ဆီသည်လုံးတင်ကို ဆုံးမပြီး ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ် ... ဟို၂ယောက်ကိုလည်း
´´ ကဲ . အင်္ဂလိပ်ကြီးနဲ့ မောင်ရင်လေး .. စိတ်မရှိကြပါနဲ့ .. ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ပဲ သတ်မှတ်ပြီး သဘောထားကြီးပေးကြပါ ...´´ လို့ပြောတော့
အင်္ဂလိပ်ကြီးနဲ့ ဗမာကြီးလည်း မျက်နှာလေးငိုမဲ့နဲ့ ခေါင်းညိတ်ကြလေသတဲ့ ... ပြီးတော့ ဆေးဆရာဆီကို သွား ... ဆေးကုကြတာပေါ့ ...
ရွာသူ/သားတွေလည်း ငိုအားထက် ရယ်အားသန် ပြောစမှတ်ဖြစ်လာတဲ့
See the Swallow ! ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသား ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်လာတာပေါ့
ဆီသည်မကလည်း အသံကြားပြီး . သူမကိုများ ဆွဲ ဟိုဟာပြုမယ်ထင်လို့ ပြေးတာပါ ...
ဟို၂ယောက်ကလည်း သူမနောက်ကနေမခွါတန်း လိုက်ပြေးလာတော့ ရှုတ်ကုန်တာပေါ့နော့် ...
မိတ်ဆွေတို့လည်း အင်္ဂလိပ်စကားကို အင်္ဂလိပ်နယ်မြေတွေမှာပဲ ပြောကြပါလို့ အကြံပြုပါရစေ ...
ပြောတဲ့သူကတော့ သူဟာနဲ့သူ ဟုတ်နေတာပေါ့ ...
ကြားရသူက ဆီသည်လုံးတင်မလိုဆိုရင် ခက် . ခက်ရချည်းသေးရဲ့နော့် ...
Post by: zero0 on March 24, 2011, 03:11:57 PM
ကကြီးကနေ အ အထိပါတဲ့စာကြောင်းတော့ အဆင်သင့်မရှိဘူးဗျ ...
သိတာလေးနဲ့ ဖောမယ်နော့် ...
အင်္ဂလိပ်မီးနင်း - စာလုံး၅လုံးပါတယ် .. ရှေ့/နောက်ပြန်ဆို - အတူတူပဲ ... အခြားလည်းရှိမယ်ထင်တယ် .
Post by: minthargyi on March 24, 2011, 03:54:19 PM
AကနေGအထိ ပါတဲ့ စာကြောင်းလေးပါ
Girls Forget Everything Done, Catch Boys Again ;D
Post by: zero0 on March 25, 2011, 10:50:52 AM
ဒီအင်္ဂလိပ်စာသားဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ ၀င်မေးလိုက်မယ်နော့် ...
ဆရာမသည် Teaching လုပ်နေပါသည်။ ...
ဂလိုဆိုရင် . အောက်က ကွက်လပ်ကို ဖြည့်စွက်ကြည့်ပါလား ...
ကျောင်းသူများသည် ------------------- လုပ်နေပါသည်။
အဖြေကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖြေစေလိုပ်သည်။
မြန်မာအသံထွက်ဖြင့် ဖြည့်/ဖြေပါက အမှတ် ၁၀၀ ကျော်ရမည်စိုးလို့ပါ ...
စဉ်းစားရင်း မေးခွန်းလေးကို ဖြေပါ ...
Post by: jasskas on March 27, 2011, 03:26:24 AM
Quote from: koleeshaygyi on March 24, 2011, 02:04:43 PM
အင်ကုလားလိပ်လို အေ မှ ဇက် အထိနော် (ရှာကြံပီးတွေ့လာတာပေါ့ဗျား) )
မြန်မာလို ကကြီး မှ အ အထိ ဝါကျတိုကတော့ ရှိမယ်ဗျ မှတ်ဥာဏ်မကောင်းတော့ ဘယ်သူထွင်တာလည်းဆိုတာတောင်သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး
အမှတ်မမှားရင် စင်ကာပူက အကို တယောက်ထွင်တာရှာလို့တွေ့နိုင်တယ်ဗျ လောလောဆယ်တော့ မူးသွားပီဗျာ (လိုက်ရှာတာမတွေ့လို့ )
Post by: zawoo1 on April 01, 2011, 07:50:02 PM
Quote from: zero0 on March 25, 2011, 10:50:52 AM
Answer - Studying ;D
Post by: drdicky on April 01, 2011, 08:16:23 PM
Isn't it Students are learning?
Post by: zero0 on April 11, 2011, 11:39:12 AM
Quote from: drdicky on April 01, 2011, 08:16:23 PM
ကျောင်းသူများသည် learning လုပ်နေပါသည်။ ;D
Post by: RedLace on April 11, 2011, 02:11:16 PM
Quote from: zero0 on March 24, 2011, 03:11:57 PM
အဲဒီလို စာလုံးတွေကို ပလင်ဒရုမ်း (palindrome) ဟု ခေါ်ပါ၏။
ဘယ်က ဖတ်ဖတ် အာတူတူဘဲပေါ့။
ဟိုသီချင်းအဖွဲ့နာမည်လေ ... REVIVER ဆိုတာမျိုးပေါ့။
Post by: RedLace on April 11, 2011, 02:37:49 PM
Quote from: zero0 on April 11, 2011, 11:39:12 AM
အဟီး ... ဆရာဆိုရင်မှ အဓိပ္ပါယ် အတိအကျမှန်မယ် ထင်တယ်ဗျ ... 8)
Post by: PigPen on May 04, 2011, 12:21:30 PM
၀န်ကြီးတစ်ယောက် စက်ရုံတစ်ရုံကို လာရောက်စစ်ဆေးတုန်းကပေါ့။
စက်ရုံမှာ ရှိတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ပညာရှင်တွေ ရှေ့မှာ သူလည်း
အင်္ဂလိပ်စကားတတ်တဲ့အကြောင်း ပြ ချင်တာနဲ့ အောက်ကလို မျိုး
*မဂျိုင်းတွေမှာ ဂျီးတွေ မရှိစေဖို့ အင်ဂျင်နီယာတွေမှာ ဓါတ်တိုင် ရှိတယ်။*
သူပြောချင်တာက *Machine တွေမှာ ဂျီးတွေ မရှိစေဖို့ အင်ဂျင်နီယာတွေမှာ Duty ရှိတယ်* လို့ ပြောချင်တာပါ။
အဲ့ဒီ့နေ့ကစပြီး စက်ရုံက အင်ဂျင်နီယာမတွေ ဂျိုင်းပြတ်အင်ကျီမ၀တ်ရဲတော့ဘူးတဲ့။
vowel (a,e,i,o,u) မပါဘဲ။ အဓိပယ်ရှိသော အင်္ဂလိပ်စာလုံးများ
Post by: drlanmadawthar on May 04, 2011, 01:33:57 PM
Quote from: perfect on May 04, 2011, 12:21:30 PM
Post by: aungmoe88888 on May 04, 2011, 02:51:21 PM
Post by: RedLace on May 13, 2011, 09:55:57 PM
Post by: ivory on November 22, 2011, 02:29:25 PM
Quote from: RedLace on May 13, 2011, 09:55:57 PM
လောလောဆယ်တော့ဒါဘဲတိတော့တယ်...... :P :P
Post by: Valkyrie on May 04, 2012, 10:08:31 AM
Quote from: zawye on March 03, 2011, 11:23:06 AM
Tim Howard = တင်အောင်ဝင်း
Walcott = ၀ဲကုတ်
Cleverley = ကလေကချေ
Evra = အီဗာ
Boas (ချယ်ဆီးနည်းပြဟောင်း) = ဘွတ်အဲ
Post by: mgbanana on August 20, 2015, 07:38:49 PM
Marlboro = M-- a----- r------- l----- b------ o- r------ o---
Marlboro = Men Always Remember Ladies Because Of Romance Only
BMW = B---- M- W----
TOYOTA = The One You Only Trust Always
Post by: lover08 on August 20, 2015, 09:02:30 PM
Quote from: Evil genius on May 04, 2012, 10:08:31 AM
Post by: mtdimple on August 28, 2015, 09:40:02 PM
Please, fill others that you know.